स्वास्थ्य – Page6– JanaSanchar.com
यी अंग ठूला हुन्छन्, भाग्यशाली महिलाको
हिन्दु धर्ममा महिलालाई सौभाग्यशाली र लक्ष्मीको रूप मानिन्छ । आज हामी महिलाहरूको बारेमा केही यस्ता रहस्य उल्लेख गर्दैछौँ, जो शायद तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ । महिलाहरूको हरेक अंगमा उनीहरूको कुनै न कुनै रहस्य लुकेको हुन्छ । महिलाहरूको हरेक अंगले उनीहरूको स्वभावको बारेमा केही दर्शाउँछ । पुराणमा पनि महिलाहरूको केही अंगहरूलाई भाग्यशाली..
तपाईंका यस्ता बानीले आउन सक्छ डन्डिफोर
अनुहारमा देखिने विभिन्न समस्यामध्ये डन्डिफोरको समस्या पनि प्रमुख हो । डन्डिफोरका कारण धेरै मानिस निराश हुने गरेका छन् । डन्डिफोरको समस्या चिल्लो छाला भएका मानिसमा धेरै देखिने गर्छ । यद्यपि, सुख्खा छाला भएका मानिसमा पनि यसको समस्या नहुने होइन । विशेषगरी, किशोरावस्थामा धेरै सताउँछ, डन्डिफोरले । के हो डन्डिफोर ? डन्डिफोर छालामा हुने एक..
कानमा आउने समस्या र समाधानका उपाय
बढ्दो उमेसँगै मानिसको सुन्ने क्षमतामा कमी आउने गर्छ । विशेषगरी, कलकारखाना, लगायतका ठूलो आवाज आउने ठाउँमा काम गर्ने मानिसको सुन्ने क्षमता चाडै कम हुनेगर्छ । कहिलेकाही विभिन्न औषधी प्रयोग, इलेक्ट्रोनिक उपकरणको अधिक प्रयोगका कारण पनि सुन्ने क्षमतामा कमी आउने गर्छ । कान कम सुनिन थालेको सुरुमा सजिलै थाहा नहुन सक्छ । तजति जति कान कम सुनिन..
काठमाडौँ – के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने धारा छुट्दा छरिएर जाने, अण्डकोष सुनिने, गनाउने, नाइटोमुनि दुख्ने, वीर्य खस्दा पोल्नेजस्ता समस्या छ ? माथि मध्येका कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने एकपल्ट सोच्नैपर्छ कतै तपाईंलाई प्रोस्टेट ग्रन्थी (पुरुष वा प्रजनन ग्रन्थी) सम्बन्धी..
टाउको दुखाईको अचूक औषधि सेक्स : वैज्ञानिकहरु
वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर र मनको थकान मेटाउछ । कसैको नजिक हुनु, उसलाई छुनु, प्यारले उसको शरीरको गहिराइमा आफ्नो एकान्त शेयर गर्नुले एक अलग्गै खालको नशा दिन्छ । र यसलाई सेक्सको..
मासिक श्रावमा प्याड प्रयोग गर्दा के कुरामा ख्याल गर्ने ?
मासिक श्रावको अवस्थामा बाहिर हिँडडुल गर्न गाह्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म घरबाहिर निस्कन नपरोस् भन्ने लाग्छ । किनभने, लामो समय घरबहिर बस्दा वा हिँडडुल गर्दा प्याड परिवर्तन गर्न संभव हुँदैन । तयसैले दिनचर्या असजिलो बनाइदिन्छ । काममा ध्यान केन्द्रित गराउन सकिादैन । लामो समयसम्म प्याड प्रयोग गर्नु असजिलो मात्र होइन,..
कम्प्युटर र मोवाइल धेरै चलाउनुहुन्छ, कतै कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम त भएको छैन?
कार्यालयमा होस् वा घरमा हिजोआज मानिसहरुले धेरै समय कम्प्युटर र ल्यापटपमा काम गर्छन्। कम्प्युटर र ल्यापटप नचलाउनेले पनि टिभी हेर्ने र नियमित मोवाइल चलाउने गर्छन्। यी प्रविधियुक्त सामानहरुले मानिसको दैनिकीलाई त धेरै सजिलो बनाइरहेको छ। तर यसले मानवस्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै हानि पुर्‍याइरहेको छ। त्यसैले यी सामानहरुको प्रयोग गर्दा ध्यान..
मुटु रोग लाग्नुका धेरै कारण छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना, अत्यधिक मदिराको सेवन, धुम्रपान, मानसिक तनाव, कोलेस्ट्रोल, शारीरिक निष्कृयता लगायतका थुप्रै कारणले मुटु रोग लाग्न सक्छ । यी सामान्य विषयका वारेमा धेरैलाई जानकारी छ । यि विषय धेरै पटक चर्चामा आइसकेका छन् । कपितयले जानकारी पाएर आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन गरेका छन् भने..